မေလ 2022 ၏ အကောင်းဆုံး Forex သရုပ်ပြအကောင့်များ | အပြည့်အဝ Beginners လမ်းညွှန်
ကုန်သည်တွေအတွက် ကျေးဇူးပါပဲ၊ Forex သရုပ်ပြအကောင့်များ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေရငွေကို အမှန်တကယ်အပ်နှံရန်မလိုဘဲ Forex ကုန်သွယ်မှုစျေးကွက်၏ အမျိုးမျိုးသောရှုထောင့်များကို စမ်းကြည့်နိုင်စေပါသည်။ စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှုအတွက်သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အချို့သောအချက်များမှာနည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းနှင့်သင့်ကိုယ်စားအရောင်းအဝယ်ပြုသည့်အော်တို Forex စက်ရုပ်ပင်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် လက်တွေ့ဘဝ Forex စျေးကွက်၏ အသွင်အပြင်နှင့် မည်ကဲ့သို့ ခံစားရသည်ကို အလွန်လက်တွေ့ သရုပ်ပြမှုတစ်ခုနှင့် တူပါသည်။ သင်သည် ငွေကြေးအတွဲများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီး ပုံမှန် Forex အရောင်းအ၀ယ်အကောင့်တစ်ခုမှတစ်ဆင့် သင့်အတွက်ရရှိနိုင်မည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် ဇယားတူးလ်များစွာအားလုံးကို စူးစမ်းလေ့လာမည်ဖြစ်သည်။
၎င်းနှင့်ပတ်သက်သော အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာ ဝယ်ရန် သို့မဟုတ် ရောင်းရန် ဆုံးဖြတ်ရာတွင် မည်သည့်အန္တရာယ်မှ ခံယူရန် မလိုအပ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ကျွမ်းကျင်သော ကုန်သည် သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူဖြစ်စေ၊ သင်သည် များသောအားဖြင့် အန္တရာယ်မရှိဘဲ လက်တွေ့ကမ္ဘာစျေးကွက်အခြေအနေများကို ပုံတူပွားနိုင်သည်။
ဤ Best Forex Demo Account 2022 - အပြည့်အဝစတင်သူများလမ်းညွှန်တွင် Forex သရုပ်ပြအကောင့်များအကြောင်းသိထားသင့်သမျှအသေးစိတ်ကို - မည်သို့စတင်ရမည်၊ အကောင်းအဆိုးဆိုးများနှင့်သရုပ်ပြအကောင့်ကုန်သွယ်မှုမဟာဗျူဟာများအပါအဝင်အသေးစိတ်ကိုသွားပါမည်။
Forex Demo အကောင့်ဆိုတာဘာလဲ။
အမှန်ကတော့, အကောင်းဆုံး Forex သရုပ်ပြအကောင့်ကုန်သည်တွေကတစ်ပြားတစ်ချပ်မအပ်ဘဲဘဏ္financialာရေးတူရိယာတွေကိုရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုတယ်။ ကိစ္စရပ်အတော်များများတွင်သင်သည်အွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်သောအခါ Forex demo account ရန်ပုံငွေများကိုသင်ရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏တကယ့်ငွေကိုအသုံးမပြုပါ။
သရုပ်ပြအကောင့်များ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ လက်တွေ့ဘဝစျေးကွက်အခြေအနေများကို စမ်းကြည့်နိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ စတင်ရန် စပေါ်ငွေ မလိုအပ်သောကြောင့် စွန့်စားခြင်းမရှိဘဲ အားလုံး။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုဖြင့်စတင်ရန်သင်သည်များသောအားဖြင့်အွန်လိုင်း Forex ပွဲစားကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်ပွဲစားများမှတစ်ဆင့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်စျေးကွက်သို့ချက်ချင်းလက်လှမ်းမီသင့်သည်။
အချို့သောအခြေအနေများတွင် demo account ကို MT5 သို့မဟုတ် desktop ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့်သင်ရရှိနိုင်ပါသည် MT4။ အခြားကိစ္စရပ်များတွင်၊ သင်၏ဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်သင့်အားလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သင်၏ Forex demo account သည်များသောအားဖြင့်ဘဏ္financialာရေးစျေးကွက်များ၌ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကိုထင်ဟပ်ပြလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တိုက်ရိုက်အခြေအနေများမှတစ်ဆင့်ကုန်သွယ်လိမ့်မည်။ ငါf သရုပ်ပြအကောင့်က ၎င်းကို မပေးဆောင်ပါက သင်သည် အကျိုးခံစားခွင့်များ အပြည့်အဝရရှိနိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့် အခြားပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေသင့်သည်။
Forex Demo Accounts ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
သရုပ်ပြအကောင့်ကို အသုံးပြုရန် မည်သည့်အရာမှ ငွေသွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။
၎င်းသည် သင်၏ ကုန်သွယ်မှုဗျူဟာအသစ်များကို စမ်းသပ်ရန် ပြီးပြည့်စုံသော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများ လည်ပတ်ပုံကို နားလည်ခြင်း။
ဘယ်လိုအသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာပါ အော်တိုကုန်သွယ် စနစ်။
အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို စမ်းသပ်ခြင်း ဆိုပြီးတော့။
အဆိုပါအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဘို့ကြီးသော အွန်လိုင်းကုန်သွယ် ပတ်ဝန်းကျင်။
ကုန်သွယ်မှုတွင် သင်ပုံမှန်မဟုတ်သော ကြီးမားသော စွန့်စားမှုများကို ယူဆောင်သွားရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
သင်ငွေအရှုံး သို့မဟုတ် အနိုင်ရနေချိန်တွင် အမှန်တကယ် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို တွေ့ကြုံခံစားရရန် မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး Forex Demo အကောင့်များကိုမည်သည့်အတွက်အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။
ပထမတစ်ချက်မှာ demo account များသည်အစပြုသူများအတွက်သာဖြစ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်းဤအရာသည်အမှန်တကယ်မဟုတ်ပါ။ သင်တန်း၏၊ လူသစ်များသည် Forex ၏ကြိုးများကိုသင်ယူရန် demo account ကိုအမှန်ပင်သုံးနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးကုန်သည်များပင်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်မဟာဗျူဟာအမျိုးမျိုးကိုစမ်းသပ်ရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးသည်သင်၏တကယ့်ငွေရင်းတစ်ပြားမှမစွန့်ဘဲမနေနိုင်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့သည် အကောင်းဆုံး Forex သရုပ်ပြအကောင့်များသည် သင့်အချိန်နှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ရသည့် အကြောင်းရင်းများစာရင်းကို စုစည်းထားပါသည်။
သရုပ်ပြအကောင့်တွေဟာလူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပေမယ့်လေ့လာသူတစ်ယောက်အတွက်သိသာထင်ရှားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိမယ်လို့ပြောရမှာပါ။ အမှန်ကတော့, ဒါဟာကုန်သွယ်ငွေကြေးများ၏အတွင်းပိုင်းအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ပြင်သင်ယူဖို့အလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရင်က ဘယ်မှာစရောင်းရမလဲ ဒါမှမဟုတ် ၀ယ်ဖို့အမှာစာမတင်ဖူးဘူးဆိုရင်တောင်မှ သင့်ကိုယ်ပိုင်အရင်းအနှီးကို မစွန့်စားဘဲ စမ်းသုံးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဤနေရာတွင်ဖော်ပြရန်ပထမ ဦး ဆုံးအချက်တစ်ခုမှာ demo account ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်စျေးကွက်အမှာစာများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်သည်။
Forex ကုန်သွယ်စျေးကွက်များတွင်အသုံးပြုသောဘုံအမှာစာအချို့မှာ -
မှာယူမှုများကို ၀ ယ်ပါ
ဤအရာအားလုံးသည်သင်၏Форексပွဲစားကိုသင်ဘာလုပ်ချင်သည်နှင့်သင်၏နောက်ပြောင်းရွှေ့မှုကိုနားလည်စေရန်အမိန့်များဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အကောင်းဆုံး Forex demo အကောင့်တွေကိုသုံးတဲ့အခါဒီစျေးကွက်အမှာစာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ငွေကုန်ကြေးကျများတဲ့အမှားမလုပ်မိအောင်သင်လုပ်လိမ့်မယ်။
သင်သည် စျေးကွက်အမှာစာများကို ကောင်းစွာဆုပ်ကိုင်ထားနိုင်ပြီး Forex ကုန်သွယ်မှုတွင် မည်သို့လုပ်ဆောင်ကြသည့်အဆင့်သို့ ရောက်ရှိသောအခါတွင် သင်သည် စျေးကွက်လမ်းကြောင်းများကို လေ့လာရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤစျေးနှုန်းရွေ့လျားမှုလမ်းကြောင်းများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ တူရိယာများသည် စျေးကွက်အတွင်း ပုံမှန်အားဖြင့် မည်ကဲ့သို့ ရွေ့လျားသည်ကို ဗဟုသုတများစွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
သင်၏အမှာစာများကိုစျေးကွက်တွင်းမှရုတ်တရက်လှုပ်ရှားမှုမှကာကွယ်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Forex demo အကောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်အသုံး ၀ င်သည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ၎င်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်အနာဂတ်တွင်သင့်အားအလွန်စိတ်သောကရောက်စေသည့်စိတ်ဖိစီးမှုများကိုသက်သာစေသည်။
ကျနော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းထင်ပါတယ် ပျံ့နှံ့ Forex trading မှအမြတ်ရရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုများစွာထိခိုက်နိုင်သောကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒါကြောင့်ပြန့်ပွားမှုနဲ့ပတ်သက်လာလျှင်သင်ဟာအတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးဆိုရင် forex demo account ကိုအသုံးပြုခြင်းမှအကျိုးရှိမှာပါ။
အလုပ်ပြန့်ပွားပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင်၏ demo အကောင့်ကိုအပြည့်အဝအသုံးချခြင်းသည်ကုန်သွယ်ရေးနေ့တစ်လျှောက်နှင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီစျေးနှုန်းအတက်အကျကိုသရုပ်ပြရန်ဖြစ်သည်။
အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်အများစုသည်ကုန်သွယ်မှုအရင်းအနှီးကိုမြှင့်တင်ရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သြဇာကိရိယာများကိုအပြည့်အဝအသုံးချကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဘဝ၌အမှုအရာအများစုဆန့်ကျင်ဘက်နှင့်သြဇာနှင့်အတူ, ဒီလည်းသင့်ရဲ့အနေအထားကိုတိုးမြှင့်မယ့်အစားအခြားလမ်းကိုသွားနှင့်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဆိုလိုသည်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဒါကိုလက်တွေ့ကျတဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့မလုပ်ခင်သရုပ်ပြအကောင့်ကနေတွန်းအားတွေကိုလေ့လာဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဤနည်းဖြင့်၊ margin ဖြင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါတွင် အကောင်း၊ အဆိုး၊ အရုပ်ဆိုးများကို မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပွဲစားတစ် ဦး ထွက်ကြိုးစားနေ
Forex ပွဲစားများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းတွင် Demo အကောင့်များသည်အလွန်တောက်ပသည်။ အကြောင်းမှာမည်သည့်ရန်ပုံငွေမဆိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်၊ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်စျေးကွက်အတွင်းမည်သို့လည်ပတ်နေသည်ကိုသင်မြင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Forex သရုပ်ပြရလဒ်များကို သင်ကျေနပ်သည်နှင့်၊ သင်သည် သင်နှစ်သက်ရာ ပွဲစားနှင့် စံအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Forex စျေးကွက်တွေ ဘယ်လိုလည်ပတ်နေလဲဆိုတာကို သေချာနားလည်ထားဖို့ အရင်ဆုံးသေချာဖို့လိုတာကြောင့် အဲဒါကို ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
Forex စျေးကွက်ကြိုးများကို လေ့လာခြင်းတွင် နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှု၊ ဇယားများနှင့် အခြေခံအားဖြင့် 'လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သင်ယူခြင်း' အများအပြားပါဝင်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောနည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနည်းစနစ်များအကြောင်းသင်ကိုယ်တိုင်လေ့လာခြင်းသည်သင်၏အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ၌အောင်မြင်ရန်အခွင့်အလမ်းများစွာပေးလိမ့်မည်။
အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာချက်သည် Forex ဇယားများကိုဖတ်ရှုခြင်းနည်းပညာဖြစ်သည်။ ပင်မအယူအဆသည် အနာဂတ်တွင် စျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းသို့သွားမည့်နေရာကို ခန့်မှန်းနိုင်ရန် သမိုင်းဝင်နှင့် လက်ရှိစျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းများကို လေ့လာခြင်းအပေါ် ဗဟိုပြုပါသည်။
လှို: အမျိုးအစားအလိုက် စျေးကွက်များတွင် အားကောင်းသည့်လမ်းကြောင်းမရှိသည့်အခါ အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာ countertrend ညွှန်ပြလိုက်ရတယ်။
ဘီလ်ဝီလျံအညွှန်းကိန်း: တော်လှန်ရေးဆိုင်ရာနည်းပညာညွှန်းကိန်းများနှင့်မဟာဗျူဟာများစွာကိုတီထွင်ခဲ့သောအထင်ကရစျေးကွက်လေ့လာဆန်းစစ်သူနှင့်ကုန်သည်။ ဤအညွှန်းကိန်းများသည် oscillators များလည်းဖြစ်လေ့ရှိသည်။
Trend အညွှန်းကိန်း: Tရွေ့လျားပျမ်းမျှ အမျိုးမျိုး (ရက် 100၊ ရက် 50 စသည်ဖြင့်) ကို အသုံးပြု၍ အယ်လဂိုရီသမ်များက စောင့်ကြည့် ပေးသည်။
Volume အညွှန်းကိန်း: ပမာဏအတွက်တွက်ဆခြင်း၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းစျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုအရေအတွက်။
ရုပ်သံလိုင်းအညွှန်းကိန်း - များသောအားဖြင့်စျေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးနှင့်နိမ့်သောစျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းများပါဝင်သည်။
Bollinger ကြိုးနှင့်ချည်နှောင်ခြင်း - အနုတ်လက္ခဏာနှင့်အပြုသဘော trendlines ။
RSI - ဆွေမျိုးအစွမ်းသတ္တိအညွှန်းကိန်းဟာရေပန်းစားလှိုသည်
Stochastics - နောက်ထပ်အကျယ်လူကြိုက်များလှို
အံ့သြဖွယ်လှို - ဆဲလှိုပေမယ့်ဘီလ်ဝီလျံညွှန်ပြချက်။
MACD - များအတွက်အတိုကောက် ရွေ့လျားပျမ်းမျှပျမ်းမျှအားဖေါ်ပြခြင်း Moving Average Convergence မတူကွဲပြားမှု။
CCI - ခေါ်ကုန်စည်ဒိုင်ချန်နယ်ညွှန်းကိန်းသည်အလွန်များပြားသောလူကြိုက်များသည့်အညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ဇယားဖတ်ခြင်းစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာညွှန်ကိန်းတစ်ခုထက်ပို၍ အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ဤအရာကို ကောင်းကောင်းနားလည်ရန် Forex demo အကောင့်ကို အခမဲ့လေ့ကျင့်ရန် အသုံးပြုခြင်းထက် ပိုကောင်းသောနည်းလမ်းမရှိပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ စွန့်စားရန်မလိုအပ်ပါ။
အတွေ့အကြုံရှိပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောကုန်သည်များပင်သရုပ်ပြအကောင့်များကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များသည်အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာအသစ်များကိုကျင့်သုံးရန်သရုပ်ပြအကောင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြီးခဲ့သည့်လကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဒီနေ့အလုပ်မဖြစ်နိူင်တာကြောင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးပြိုင်ဘက်များထက်တစ်ဆင့်တက်ခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
အန္တရာယ်-ကင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ အသစ်တစ်ခုကို စမ်းကြည့်ချင်တဲ့အချိန်လည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖန်၊ ၎င်းသည် Forex သရုပ်ပြအကောင့်များကို အဖိုးမဖြတ်နိုင်စေသည်။
ကုန်သည်တစ်ယောက်အနေနဲ့၊ သင်ထင်ထားသလိုမျိုး ဗျူဟာတစ်ခုက အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ အချိန်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်၊ ၎င်းကို သရုပ်ပြအကောင့်မှတစ်ဆင့် စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် လမ်းတစ်လျှောက်တွင် ပြောင်းလဲမှုများနှင့် တိုးတက်မှုများကို ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့နည်းဗျူဟာလိုမင်းခံစားရတဲ့အခါ အမှန် ငွေကုန်ကြေးကျခံပြီးကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်လျှင်၎င်းကိုသင်အမှန်တကယ် Forex trading account တစ်ခုတွင်အသုံးချပြီးအမြတ်အစွန်းကိုခံစားနိုင်သည်။
အချက်ပြမှုများသည်အွန်လိုင်း Forex Trading နယ်ပယ်တွင်ပိုမိုပျံ့နှံ့လာနေသည်။ များသောအားဖြင့်ဤအချက်သည်တိကျသောငွေကြေးစုံတွဲတစ်ခုပေါ်ရှိသတ်မှတ်ထားသောအချိန် (သို့) စျေးနှုန်းဖြင့်ကုန်သွယ်မှုစတင်ရန်ထောက်ခံချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအချက်ပြမှုကို forex စက်ရုပ်သို့မဟုတ်အမှန်တကယ်လူ့လေ့လာသုံးသပ်သူများကဖန်တီးလိမ့်မည်။
အချက်ပြဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိရန် ငွေပေးချေမှုအနည်းငယ် လိုအပ်သော်လည်း၊ သရုပ်ပြအကောင့်မှ ၎င်းကို စမ်းသပ်ရန် သေချာပေါက်ခွင့်ပြုပါမည်။ သင်၏အချက်ပြမှုများကိုရေရှည်တာဝန်မယူမီအခြား Forex မဟာဗျူဟာများနှင့် စနစ်များနှင့်အတူ တွဲဖက်သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
Forex demo အကောင့်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအကျိုးအရှိဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းငွေအမြောက်အများဆုံးရှုံးသွားမည်ကိုမစိုးရိမ်ဘဲ signal service ကိုကြိုးစားစမ်းကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ဆန်းစစ်မှုပြီးဆုံးသည်နှင့်အချက်ပြမှုများသည်သင့်အတွက်ရေရှည်အဖြေတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသင်ထင်သည်၊ မစဉ်းစားနိုင်သည်။ သင်မဟုတ်ဟုသင်ဆုံးဖြတ်လျှင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပံ့ပိုးသူများကသင့်အားအပြည့်အဝပြန်အမ်းငွေပေးလိမ့်မည်။
Forex demo account များသည်ကျွမ်းကျင်သောအကြံပေးများ (ခေါ် EAs) သို့မဟုတ် forex စက်ရုပ်များကဲ့သို့သောကုန်သွယ်ရေးစနစ်များကိုစမ်းသပ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးလုပ်ရမှာက MT4 or MT4 ကို ၀ င်ရောက်နိုင်သည့် online forex ပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်သည်ပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် Forex demo အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးသင်၏ဆော့ဖ်ဝဲကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ ဤအချက်မှာသင်၏ကုန်သွယ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအလိုအလျောက် Forex စက်ရုပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အလိုအလျောက်ဆော့ဖ်ဝဲကိုသင့်ကိုယ်စားရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင် မှတ်သားထားရမည့် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ သင်သည် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန် တိုက်ရိုက်သရုပ်ပြအကောင့်ကို အမှန်တကယ် အသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အလိုအလျောက်စက်ရုပ်သည် သင့်အား ငွေအမြောက်အမြားရစေသည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ ၎င်းသည် သင့်အတွက် အမှန်တကယ် ကွာခြားမှုမဖြစ်စေပါ။ သင်၏ကိုယ်စားအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ထားသော forex စက်ရုပ်များပြုလုပ်ခဲ့သည့်အလုပ်ကိုသင်နှစ်သက်ပါက၊ အမြဲတမ်းရှုံးနိမ့်ပြီးလက်တွေ့ဘဝ Forex အကျိုးဆောင်စာရင်းသို့ပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်။
Forex Demo အကောင့်များ၏အဆင်မပြေ
Forex သရုပ်ပြအကောင့်များနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် အမှားအယွင်းများစွာ ရှိသည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ ဤအရာ၏ ရှေ့ဆုံးတွင် အပိုအန္တရာယ်များကို ယူခြင်းဖြင့် သယ်ဆောင်ရန် လွယ်ကူနိုင်သည် (၎င်းသည် သင့်အတွက် အမှန်တကယ် ကုန်ကျမည် မဟုတ်ကြောင်း သိထားပါ)။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည် သင့်အား စစ်မှန်သောငွေဖြင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သောအခါတွင် မှားယွင်းသော မျှော်လင့်ချက်ကို ပေးနိုင်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကိုရက်ပေါင်း (သို့) ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာသုံးပြီးကုန်သွယ်မှုသည်လွယ်ကူသည်ဟုသင်ယူဆပြီးနောက်သင်၏ ၅၀% ရာခိုင်နှုန်းပြန်လာနိုင်သည်။ သင်အတွေ့အကြုံနည်းသောကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သမျှအဆိုးဆုံးအရာသည်သင်၏ Forex ပွဲစားသို့သွားသည်၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ထဲသို့ရန်ပုံငွေများထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အစစ်အမှန်ကုန်သွယ်ခြင်းဖြင့်အစစ်အမှန်ငွေများဖြင့်စတင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ forex trading သည် သရုပ်ပြအကောင့်တွင် အလွန်လွယ်ကူသည်ဟု ထင်ရသောကြောင့်၊ ၎င်းသည် လက်တွေ့ဘဝတွင် ကုန်သွယ်မှုဈေးကွက်တွင် အမြဲရှိမည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်ယူခြင်း၏ အကျိုးဆက်များသည် သင့်ဘဏ်လက်ကျန်အတွက် ဆိုးရွားနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် Forex demo အကောင့်များသည်သင့်ကိုယ်ပိုင်ငွေနှင့်သင်ထက်ပိုမိုကြီးမားသောအန္တရာယ်များကိုယူဆောင်စေနိုင်သည်။ ထိုအန္တရာယ်မရှိဟုခံစားရခြင်းကသင့်အားလုံခြုံစိတ်ချရသောမှားယွင်းသောခံစားချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး၎င်းသည်လှည့်စားရန်လွယ်ကူပုံရသည်။
ဤသည်မှာ 'forex trading psychology' ဟုခေါ်သည့်အရာကို ဆင်းသက်လာသည်။ ၎င်းသည် စျေးကွက်တွင် အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက်များချသောအခါတွင် ကုန်သည်များမှ ပြသသည့် အတွေ့ရအများဆုံး စိတ်ခံစားမှု သုံးခုကို ရည်ညွှန်းသည်။
ဤရွေ့ကားစိတ်ခံစားမှု3အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြသည်
ကြောက်စိတ် Tသူဟာအန္တရာယ်ပိုများလေ၊ သင်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အပြုအမူများများလုပ်လေလေ။ ဤအရာသည်သင်၏အမှားကိုတန်ပြန်ရန်သင်ပိုမိုကြီးမားသောအန္တရာယ်များကိုယူဆောင်စေနိုင်သည်။
လောဘကြီးမှု၊ အကယ်၍ သင်သည်ကြီးမားသောကုန်သွယ်မှုများကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေရခြင်းသို့မဟုတ်ကြီးမားသောစွန့်စားမှုများသည်သင်၏အချိန်နှင့်ထိုက်တန်ကြောင်းခံစားမိလျှင်သင်အနည်းငယ်လောဘကြီးလာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အဲဒီအစား, သင် Forex ကုန်သွယ်ရေရှည်ခရီးအဖြစ်ရှုမြင်ရန်လိုအပ်သည်။
စိတ်လှုပ်ရှားမှု / ခံယူချက် ကုန်သည်များသည်ကုန်သွယ်မှုသို့ ၀ င်ရောက်တိုင်းဤစိတ်ခံစားမှုကိုခံစားကြသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးသင်ကုန်သွယ်မှု၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်သင်ဤစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုစားသုံးနိုင်သည်။
လောဘနှင့်ပါလာသောယုံကြည်မှုသည်အရောင်းအဝယ်အတွက်ကောင်းသောအရာဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကုန်သည်ကိုအနည်းငယ်သာထင်စေနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ Forex အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သောအခါဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းစွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းစေသည်။ ကုန်သည်အများစုသည်တစ်ပတ်အတွင်းဆုံးရှုံးမှုများကြုံတွေ့ရလိမ့်မည် - ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာလျှင်အနီရောင်သို့မဟုတ်ဆိုးဝါးသောအနေအထားရှိသလား။
၎င်းတို့၏ စွန့်စားစီမံခန့်ခွဲမှုဗျူဟာများကို ခြေရာခံဆုံးရှုံးပြီး မှန်ကန်သောနည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုကိရိယာများကို အသုံးမပြုသော ကောက်ကျစ်သောကုန်သည်များသည် ဆိုးရွားသောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြင့် မကြာမီအဆုံးသတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ tသူသတိရရမယ့်အဓိကအချက်ကတော့ demo account ကိုအသုံးပြုခြင်းဟာသင်ဟာကုန်သွယ်ရေးအတွေ့အကြုံရဲ့စိတ်ခံစားမှုဘက်ကိုမရရှိနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။
သင့်သရုပ်ပြအကောင့်တွင် အမြတ်အစွန်းများ ဆုံးရှုံးမှု နှစ်မျိုးလုံးရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော် သင့်တွင် အမှန်တကယ်ငွေဖြင့် အမှန်တကယ်ခံစားရသည့်အတိုင်း တူညီသောခံစားချက်မျိုး ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ငွေဖြင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည်နှင့်သင်ကုန်သွယ်မှုဇီဝဗေဒကိုနားလည်နိုင်သည်ဟုများစွာသောအငြင်းအခုံဖြစ်လိမ့်မည်။
Forex Demo အကောင့်ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ
Forex demo အကောင့်ကိုသုံးခြင်း၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင်ယခုအပြည့်အဝဝင်ရောက်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်စင်မြင့်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။
ပွဲစားတစ်ခုစီသည် အနည်းငယ်ကွဲပြားမည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြင့်၊ အကောင်းဆုံး Forex သရုပ်ပြအကောင့်များကို ရှာဖွေသည့်အခါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာများစာရင်းကို စုစည်းထားပါသည်။
ဒါဟာအမှန်တကယ်ပိုက်ဆံနှင့်ကုန်သွယ်ရန်ကြွလာသောအခါပွဲစားများကိုသာပြောင်းလဲရန် (သင်၏သရုပ်ပြအကောင့်ကိုသုံးပြီး) တိကျတဲ့ Forex ပွဲစား (အချို့သော) Forex ပွဲစားများကိုစမ်းသပ်နှင့်စောင့်ကြည့်ဖို့ဖြုန်းဖို့အနည်းငယ်တန်ပြန်စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ သင်ဤတန်ပြန်အကျိုးရလဒ်ကိုရှာတွေ့နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းမှာ Forex ပွဲစားအသစ်သည်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုနောက်ဆုံးနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းဖြင့်လည်ပတ်ရန်ထွက်လာနိုင်ခြင်းကြောင့်သင်ကုန်သွယ်လိုသည့်နည်းလမ်းနှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်၌သင်အသုံးပြုနေသည်ကိုအွန်လိုင်းပွဲစားမှတဆင့်သရုပ်ပြအကောင့်ဖွင့်ရန်အကြံပေးသည်။ ပြီးနောက်သင်၏ Forex demo အကောင့်ပေါ်တွင်သင်ကုန်သွယ်သောအခါစျေးကွက်အခြေအနေအမှန်နှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။
ပွဲစားများအကြားတွင်ငွေကြေးအတွဲများပျံ့နှံ့မှုကွဲပြားကြောင်းသင်တွေ့ရှိကောင်းတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဥပမာ - သင်၏သရုပ်ပြအကောင့်ပွဲစားသည် ၀.၇ ပျံ့နှံ့နိုင်သည် pips USD/GBP တွင်၊ မတူညီသော Forex ပွဲစားမှ 1.2 pip ဖြင့် ပိုမိုမြင့်မားသောပမာဏကို ကောက်ခံနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် ၎င်းတို့၏ သီးခြားပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် သရုပ်ပြအကောင့်ကို နှစ်သက်ပြီဆိုလျှင် ကိစ္စများကို အလွန်အမင်း ရှုပ်ထွေးအောင် မလုပ်ဘဲ Forex ပွဲစားကို မှီဝဲခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ရီးရဲလ် - ကမ္ဘာ့စျေးကွက်အခြေအနေများ
အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထိခဲ့သကဲ့သို့၊ အကောင်းဆုံး Forex သရုပ်ပြအကောင့်များသည် သင့်အား လက်တွေ့ကမ္ဘာစျေးကွက်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ မဟုတ်ရင် ဒီမိုမှာ အမှတ်အများကြီး မရှိပါဘူး။
ဤအစစ်အမှန်ကမ္ဘာစျေးကွက်အခြေအနေများသည် Forex trading အကြောင်းလေ့လာခြင်းနှင့်အောင်မြင်သောကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်တည်ဆောက်ခြင်း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
အချိန် - Frame ထောက်ပံ့ကြေးကိုစမ်းသပ်ပါ
ပွဲစားတစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါသင့်ရဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာရမလဲဆိုတာနဲ့အမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။ အကြောင်းမှာအချို့ပွဲစားများသည်ရက်အနည်းငယ်၊ အခြားသူများကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သာခွင့်ပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယုံသည်ဖြစ်စေ၊ မယုံသည်ဖြစ်စေ သရုပ်ပြအကောင့်များပင်လျှင် ကန့်သတ်ချက်များပါရှိသည်။ သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုစီသည် ဤအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ကွဲပြားမည်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် သင်အကောင့်မဖွင့်မီ ဤအချက်အလက်ကို အမြဲစစ်ဆေးရန်ကောင်းပါသည်။ အကောင်းဆုံး Forex သရုပ်ပြအကောင့်အချို့သည်စတင်သည့်ငွေလက်ကျန်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။
သင်အခြေခံများကိုလေ့လာပြီးသည်နှင့်သင်ရွေးချယ်ထားသောသရုပ်ပြအကောင့်မှမည်သည့်ကိရိယာများကိုသင်ရယူနိုင်မည်ကိုစတင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ထိုကဲ့သို့သောကိရိယာများသည်မသွားမီယခင်ကဆွေးနွေးခဲ့သောကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများကိုစမ်းသပ်ရန်အဓိကကျသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
သငျသညျသရုပ်ပြအကောင့်အတွက်စာရင်းသွင်းနေသော်လည်း, ထိုအရပ်၌အထဲကအချို့သောအွန်လိုင်း Forex ပွဲစားများသည်သင်၏ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတောင်းလိမ့်မည်ကိုသင်သတိပြုသင့်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာအကောင့်အများအပြားဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်လူတို့အားအခမဲ့သရုပ်ပြခြင်းကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းကိုတားဆီးရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရိုးသားသော အကြံဉာဏ်သည် ဤအရာအပေါ် ? အဆိုပါကတ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမလိုအပ်သော သရုပ်ပြအကောင့်ကို ရွေးချယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပေးပါမည်။ သရုပ်ပြတစ်ခုဖြင့် စတင်ခြင်း၏ စိတ်ကူးတစ်ခုလုံးမှာ သင်သည် အန္တရာယ်ကင်းပြီး သင်ရခဲ့သောငွေထဲမှ မည်သည့်အရာကိုမျှ အသုံးမချဘဲ အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟု ခံစားရသည်။
ပွဲစားက မမေးဘဲ သင့်ပိုက်ဆံကို ယူမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် Forex သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုကို စမ်းကြည့်ရန်အတွက် အထူးသဖြင့် ဤအစောပိုင်းအဆင့်တွင် သင်၏ငွေပေးချေမှုအချက်အလက်ကို ပေးဆောင်ရန် လုံးဝမလိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။
Forex Demo အကောင့်ဖြင့်စတင်ခြင်း
အကယ်၍ သင်သည်ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မကြုံသည်ဖြစ်စေသင် demo account တစ်ခုဖြင့်မည်သို့စတင်နိုင်မည်ကိုသင်စဉ်းစားနေ ဦး မည်လော။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံး Forex သရုပ်ပြအကောင့်လမ်းညွှန်၏ ဤကဏ္ဍတွင်၊ ယနေ့စတင်ရန် အဆင့် ၅ ဆင့်ကို စုစည်းထားပါသည်။
အဆင့် ၁ - Forex ပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်း
ကုန်သည်များအား demo account option ကိုကမ်းလှမ်းသောအွန်လိုင်းအကျိုးဆောင်တစ်ယောက်အားသင်စတင်ရန်လိုအပ်သည်။ အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်းပွဲစားတစ် ဦး သို့မှတ်ပုံတင်ခြင်းကပိုကောင်းသည်ဟုထင်မြင်ပြီးနောက်မှသင်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံဖြင့်အသုံးပြုလိုသောမင်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ကော်မရှင်များ၊ ဖြန့်ကြက်မှုများနှင့် အခကြေးငွေများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် ဤပွဲစားသည် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသလား။
ပွဲစားများ၏ ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှုသည် ဖြစ်နိုင်သလောက် ကောင်းပါသလား။ (ဤကိစ္စအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးသပ်ချက်များကို အမြဲစစ်ဆေးရန် အကြံပြုပါသည်။)
MT4 နှင့် MT5 ကို ပွဲစားမှ ပံ့ပိုးပေးပါသလား။ (ဒါက ကားအရောင်းအဝယ်အတွက် အထူးအရေးကြီးပါတယ်)။
အဆင့် ၂ - Forex Demo အကောင့်ကိုဖွင့်ပါ
အခုဒီလောက်အထိ လုပ်ထားပြီးပြီ၊ ရှေ့ဆက်ပြီး အကောင့်ဖွင့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ယခင်က ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် လူများကို အခွင့်ကောင်းယူခြင်းမှ ရပ်တန့်ရန်နှင့် တူညီသောအွန်လိုင်းပွဲစားဖြင့် သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုထက်ပို၍ဖွင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လှမ်း3- ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းရွေးချယ်ရေး
ယခု သင့်တွင် သင်ရွေးချယ်သော ပွဲစားနှင့် အကောင့်တစ်ခုရှိပြီဖြစ်သည်။ သင်နှင့် သင့်ကုန်သွယ်မှုစတိုင်အတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် သင်သည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမည်ဆိုလျှင်၎င်းသည် MT4 သို့မဟုတ် MT5 ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းပါဝင်သည်။ သင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာမှကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်လိုပါကပွဲစား၏စီးပွားဖြစ်မျက်နှာပြင်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်။
အကယ်. သင်က do MetaTrader ပလက်ဖောင်းများ (MT4 / 5) ကိုဒေါင်းလုပ်ချရန်ဆုံးဖြတ်ပါ၊ ထို့နောက်သင်သည် forex အလိုအလျောက်စက်ရုပ်ကိုစမ်းကြည့်နိုင်ပါပြီ။
အဆင့် ၄ - Demo Account ကိုစတင်အသုံးပြုပါ
အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်အရောင်းအဝယ်ပြုသကဲ့သို့သင်ယခုစျေးကွက်ရောင်းရန်၊ ၀ ယ်ရန်နှင့်လက်လှမ်းမီရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်ဤလုပ်သောအခါ, သင်၏ စက္ကူကုန်သွယ် သင်၏ Demo အကောင့်လက်ကျန်ငွေမှရန်ပုံငွေများကိုနှုတ်ယူလိမ့်မည်။
အမှာစာများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်၏သမိုင်းဝင်ကိန်းဂဏန်းများကို စောင့်ကြည့်ရန် အမြဲတကယ့်ကို သင့်လျော်သောအကြံဥာဏ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အမြတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မည်ကဲ့သို့ တရားမျှတသည်ကို အမှန်တကယ် ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ တွေးခေါ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့နည်းဗျူဟာတွေအလုပ်မဖြစ်၊ မလုပ်သည်ကိုပြောလိမ့်မယ်။ ပြီးနောက်, ဒီသရုပ်ပြအကောင့်ရှိခြင်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်!
အဆင့် ၅ - Real Forex ပွဲစားစာရင်းသို့ပြောင်းပါ
ဤအချက်အားဖြင့်သင်သည်သင်၏သရုပ်ပြအကောင့်ကိုအများဆုံးအသုံးချပြီးသင်၏ကုန်သွယ်ရေးမဟာဗျူဟာများကို 't' အထိချထားသည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်မှန်ကန်သောအသံနှင့်သင် demo အသိုက်ကိုပျံသန်းရန်နှင့် Forex ပွဲစားနှင့်အတူအကောင့်ဖွင့်ရန်လုံလောက်သောယုံကြည်မှုရှိပါက၎င်းသည်လုပ်ရန်မျှတမှုရှိသင့်သည်။
သင်သရုပ်ပြအကောင့်ဖွင့်သောအခါသင်သွားခဲ့သောပွဲစားနှင့်ကပ်နေသည်ဟုယူဆလျှင်၊ ပုံမှန်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အများစုကိုပေးပြီးဖြစ်သည်။ ယခုတွင်သင်သည်ဓာတ်ပုံနံပါတ်နှင့်လိပ်စာအထောက်အထားကိုတင်ပြရန်လိုအပ်လိမ့်မည် (ဤသည်များသောအားဖြင့်အသုံးအဆောင်ငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်ဘဏ်ငွေစာရင်း) ။
အကောင့်ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ ဤအပိုင်းကို လှည့်ပတ်ရန် နည်းလမ်းမရှိပါ။ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရာတွင် ဥပဒေပါ လိုအပ်ချက်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပွဲစားများအားလုံးသည် ဤစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
ယခု၊ သင်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်မှာ သင်၏ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကို ပွဲစားဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းပြီး သင့်အကောင့်ထဲသို့ ကုန်သွယ်မှုရန်ပုံငွေအချို့ကို အပ်နှံလိုက်ပါ။ အတွေ့ရများဆုံး ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများမှာ အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များ (ဥပမာတစ်ခု အမည်ပေးရန်အတွက် PayPal)၊ ဘဏ်အကောင့်များနှင့် ဒက်ဘစ်/ခရက်ဒစ်ကတ်များဖြစ်သည်။
Voila! ယခုသင်သည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များ၌အရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်သည်။ သတိရပါ၊ သင်သည်အစုရှယ်ယာငယ်များဖြင့်စတင်ခြင်းအားဖြင့်သတိထားမှုဘက်သို့ထုတ်လွှင့်လိုသည်။
2022 ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံး Forex Demo Accounts
အွန်လိုင်း Forex ပွဲစားများသည်များစွာသောသရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုကိုယခုအခါတွင်ပြုလုပ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မည်သည့်စင်မြင့်ပေါ်တွင်မည်သည့်လက်မှတ်ထိုးရမည်ကိုသိရန်ခက်ခဲစေသည်။
အခိုးအငွေ့ကိုရှင်းလင်းစေရန်၊ ၂၀၂၀ တွင်အကောင်းဆုံး Forex Demo အကောင့်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
1. AVATrade –2x $200 Forex ကြိုဆိုရေး ဘောနပ်စ်များ (ဘောနပ်စ်ခွင့်ပြုချက်ကို စည်းမျဉ်းအရ အတည်ပြုသည်)
MT4 မှတစ်ဆင့် သင်၏သရုပ်ပြအကောင့်ကို အသုံးပြုလိုပါက AVATrade သည် ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် AVATrade နှင့် အပြည့်အဝသဟဇာတဖြစ်သောကြောင့် အလိုအလျောက် Forex စက်ရုပ်များကို တပ်ဆင်ရန် သင်စီစဉ်ပါက ၎င်းသည်လည်း အလားတူပင်ဖြစ်သည်။ ပလပ်ဖောင်းသည် အဆင့်မြင့်ဇယားဖတ်ခြင်းကိရိယာများစွာကို ပေးဆောင်သည်။ ထို့အပြင် စတော့များ၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ အခြားသော CFD တူရိယာများကိုလည်း သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အကောင်းဆုံး Forex သရုပ်ပြအကောင့်များသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်အရင်းအနှီးကို မစွန့်စားဘဲ တကယ့်ကမ္ဘာ့ငွေကြေးဈေးကွက်များကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်စေပါသည်။ သင်စတင်သူဖြစ်ပါက ဤအရာသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား အန္တရာယ်ကင်းသည့်ပုံစံဖြင့် Forex အတွဲများကို ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း၏ကြိုးများကို လေ့လာနိုင်စေပါသည်။ spectrum ၏အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အကောင်းဆုံး forex သရုပ်ပြအကောင့်များသည် အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်များအား လက်တွေ့ကမ္ဘာမှရန်ပုံငွေများကို လိုင်းပေါ်တွင်မထည့်ဘဲ ဗျူဟာအသစ်များကို စမ်းသပ်ရန်နှင့် ပြီးပြည့်စုံစေရန် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။
နောက်ဆုံးတွင် Forex သရုပ်ပြအကောင့်များသည်သင့်အားအစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေသောစျေးနှုန်းများ၊ ဇယားများနှင့်စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်ခွင့်ပြုသည်။
Forex သရုပ်ပြအကောင့်များသည်သင့်အားမည်သည့်ငွေမျှမစွန့်ဘဲကုန်သွယ်မှုပြုရန်ခွင့်ပြုသည် အဲဒီအစား, သင်စက္ကူရန်ပုံငွေနှင့်အတူကုန်သွယ်လိမ့်မည်။
Forex demo အကောင့်ကိုဘယ်သူတွေကမ်းလှမ်းတာလဲ။
Forex demo အကောင့်ကိုသုံးရန်သင်သည်ပုံမှန်အွန်လိုင်းပွဲစားနှင့်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်လုပ်ပြီးလျှင်ပွဲစား၏သရုပ်ပြအကောင့်စက်ရုံကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သင် Forex သရုပ်ပြအကောင့်မှငွေရှာနိုင်သလား
မဟုတ်ပါ၊ သင်ပြုလုပ်သောကုန်သွယ်မှုတိုင်းသည်သရုပ်ပြငွေရန်ပုံငွေပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ထို့ကြောင့် Forex demo အကောင့်မှမည်သည့်ငွေကိုမျှသင်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။
Forex demo အကောင့်ကိုအသုံးပြုရန်ဆော့ဝဲလ်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
ပွဲစားအများစုသည် ဝဘ်ဘရောက်ဆာ ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းကို ပေးဆောင်သောကြောင့် မည်သည့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုမဆို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် မဖြစ်မနေမဖြစ်မနေဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့် MT4/5 ကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ပွဲစားကို အသုံးပြုပါက၊ သင်၏ desktop စက်တွင် ဆော့ဖ်ဝဲကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာပွဲစားမှသည်ပွဲစားနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, eToro သည်စက္ကူရန်ပုံငွေဒေါ်လာ ၁၀၀,၀၀၀ ကိုပေးသည်၊ အချို့ပွဲစားများကမူများစွာနည်းပါးသည်။
Forex demo account များသည်စျေးကွက်အခြေအနေတွင်ကုန်သွယ်မှုရှိပါသလား။
အကောင်းဆုံး Forex သရုပ်ပြအကောင့်များကသင့်အားစျေးကွက်အခြေအနေတွင်ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသည်ကိုသင်ထိရောက်သောထုံးစံ၌ Forex ကုန်သွယ်၏ကြိုးသင်ယူနိုင်ဖြစ်ကြောင်းသေချာ။
Forex Demo အကောင့်ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာအသုံးပြုနိုင်မှာလဲ။
အချို့သော Forex သရုပ်ပြအကောင့်များသည်ရန်ပုံငွေများကိုမရုပ်သိမ်းမီသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအထိကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်အချို့ပွဲစားများကသင်ဆန္ဒရှိသရွေ့၎င်းတို့၏ demo account Facility ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။ နောက်ဆုံး၌၎င်းသည်သင်၏ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစား၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဖြစ်သည်။